Farmaajo iyo Kheyrre: Laba musharax oo leh waxqabad isku mid ah; Sidee lagu kala saari doonaa? | Hadalsame Media
Home Maqaallada Farmaajo iyo Kheyrre: Laba musharax oo leh waxqabad isku mid ah; Sidee...
Farmaajo iyo Kheyrre: Laba musharax oo leh waxqabad isku mid ah; Sidee lagu kala saari doonaa?
(Hadalsame) 31 Maajo 2021 – Musharixiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya waa xilligan 2021 waxaa ka mida laba musharax oo aan la kala saari karin, taariikhdana ku galay inay ahaayeen Madaxweyne iyo Ra’iisal wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee isla soo shaqeeyay.
Ma kala cadda, isaguna ma caddeyn Kheyrre inuu uga hor yimid qorshihii Farmaajo isagoo rajo badan ka qabay inuu xilka kala wareegi karo haddii uu is sharxo iyo inay dantiisu ahayd dhowrista dastuurka iyo diidmada sharci darrada.
Previous articleWeriye caan ah oo ESPN ka tirsan oo si xun ugu digtey kooxda Manchester City (Muxuu yiri?)
Next article”Turkigu wuxuu Libya ku adeegsadey hub kaligii go’aan gaaraya oo aan horay abid dagaal loogu arag!” – QM oo kashiftay arrin dunida ka qarsanayd